Maaha Waqtigii Ku Habboonaa – Sababtii Uu Tababare Michael Laudrup U Diiday Real Madrid Oo La Ogaaday – Cadalool.com
Maaha Waqtigii Ku Habboonaa – Sababtii Uu Tababare Michael Laudrup U Diiday Real Madrid Oo La Ogaaday
Ka hor intii aan lagu dhawaaqin in shaqada laga caydhiyey Julen Lopetegui, Reall Madrid ayaa la xidhiidhay tababareyaal dhawr ah oo ay doonaysay inay beddelaan macallinka shaqada laga caydhinayey, waxaana raggaas hoggaaminayey Conte oo waqti dambe ay burbureen wada-xaajoodkii u socday masuuliyiinta Los Blancos kaddib dalabyo uu ku xidhay. Waxa kale oo ragga lala xidhiidhiyey safka koowaad kaga jiray tababaraha Tottenham, Pochettino oo illaa hadda aan ka bixin qorshaha madaxweyne Perez.
Ka sokow tababareyaashaas, waxa jiray mid saddexaad oo hore warbaahintu usii tebisay inuu diyaar u yahay shaqadaas, kaas oo waliba leh waayo aragnimo badan oo gudaha Los Blancos ah oo uu muddo u ciyaaray.
Warbaahinta dalka Spain ayaa ogaatay in Real Madrid ay xidhiidh la samaysay Michael Laudrup waqtigii uu ciyaartoyga ahaa guulo la gaadhay kooxda, balse shaqo la’aan ahaa muddooyinkii u dambeeyey markii uu ka tegay kooxdii uu macallinka u ahaa.
Michael Laudrup ayaa u sheegay Real Madrid inuu jecel yahay inuu tababare u noqdo, laakiin xilligan ay xaaladdu xun tahay oo aanu diyaaar u ahayn.
Tababarahan reer Denmark ayaa la sheegay in aanay qancinin qorshaha kooxdu ku soconayso ee masuuliyiintu usoo bandhigeen, kuwaas oo uu ku adkaystay in xilligan ay sabab u noqonayaan inuu ku fashilmo shaqada oo aanu isbeddel ku samayn karin.
Wakiilka Michael Laudrup oo lagu magacaabo Bhyram Tutumlu ayaa sheegay in uu doonayey shaqada balse xaaladdu aanay saamaxaynin.